Heshiis qarsoodi ah oo wasiirka gaashaandhigu la saxiixday shirkan Emaaraad ah oo dowladu go.aanka qaadatay | Somalisan.com
Home Afsomali Heshiis qarsoodi ah oo wasiirka gaashaandhigu la saxiixday shirkan Emaaraad ah oo...
Heshiis qarsoodi ah oo wasiirka gaashaandhigu la saxiixday shirkan Emaaraad ah oo dowladu go.aanka qaadatay
Wasaaradda Gaashaandhigga ee dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dhawaan Heshiis qarsoodi ah la gashay shirkad shisheeye, taasi oo fadhigeedu yahay islamarkaana ka diiwaangashan dalka Imaaraadka Carabta.
Shirkaddan oo lagu magacaabo SKA International ayaa kula heshiisay Wasaaradda Gaashaandhigga inay ka taageerto gaarsiinta Sahayda Ciidamada Xoogga dalka ee ku sugan goobaha Al Shabaab laga saarey.
Heshiiskan ayaa dhinac SKA ku waajibinaya inay bixiso dhamaan qalab ay ku jiraan gaadiid ku shaqeyn karo xaalad walba iyo shaqaalaha saadka gaarsiinaya goobaha loogu tala galay ee Ciidanka uu joogo.
Waxaa ku jira Heshiiska qodob xambaarsan waxa loogu yeeray ujeedooyinka ganacsi, kuwaasi oo aan wali fahfaahin laga bixin.
SKA ayaa sidoo kale heshiiska ku qasbayaa inay shidaal ku dhubto gaadiidka daabulaya saadka iyo inay bixiyo gunnooyinka iyo raashiinka Ciidamada ka ilaalinaya baabuurta Kolonyada weerarada Al-Shabaab.
Dhinaca Wasaaradda Gaashaandhiga waxa uu Heshiiskan ku waajibinayaa qodobo ay kamid yihiin inay bixiso kaalmo toos ah oo isagu jira ilaalada hubaysan ee galbinaya Gaadiidka sahayda qaadaya ee SKA.
Ciidamada ayaa sidoo kale laga doonayaa inay ilaaliyaan amaanka shaqaalaha iyo Gaadiidka SKA oo khatar ugu jira weerarada Al Shabaab xilliga ay ku safarayaan wadooyinka isku xira gobollada dalka.
Taliyaha Ciidamada Xoogga dalka, Jeneraal Cabdiweli Jaamac Xuseen [Gorod] ayaa xaqiijiyay saxiixa heshiiskan, isagoo sheegay in wax dhaqaale ah aan Wasaaradda difaaca uga baxeynin shaqada SKA.
Wasiirka Maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaalle Beyle, oo mas’uul xafiiska iibka iyo qandaraaska dowladda, ayaa sheegay inuusan waxba kala socon heshiiskan ay wasaaradda difaaca iyo SKA kala saxiixdeen, sidaasi darteedna uu yahay waxbka kama jiraan.
SKA International, oo asal ahaan laga leeyahay Mareykanka ayaa mudo sanado ah soo maamushay Garoonka diyaaradaha Muqdisho xilli dalka ay ka talinaysay dowladda KMG ahayd ee Madaxweyne Sheekh Shariif.
Hoos Ka aqruso warsaxaafadeedka
Previous articleVIDEO Tiyaatarkaa Tacbaan ahee nimanki toosiyey u tilmaan iyo Safiirka shiinaha oo Xirtay dharka Hidaha & dhaqaanka Somalida
Next articleCabdi weli gaas oo warbaahinada caalamka hortooda u sigtay in uu yiraahdo dowlada fadaraalku nama matasho halka Axmed madoobe weli uusan hadlin labaduba dubai ayey ku sugan yihiin xaalku waa hala qaraabto
Guddoomiye Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo Khudbad jeediyey kulan looga hadlayey Qadiyada Falastiin
Somalisan News - March 4, 2019
Madaxweynaha JSL Iyo Saddexda Xisbi Qaran Oo Heshiis Ka Gaadhay Khilaafkii Ka Taagnaa Guddida...
Xildhibaan Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan oo ka mid noqotay aqalka hoose ee Baarlamaanka cusub...
Somalisan News - January 1, 2017
Full VIDEO Madaxweyne Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo oo si weyn loogu soo dhaweeyey...